Hotellọ nkwari akụ Monte-Carlo Beach: Ọlaedo rụzuru organic
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịrụ ọrụ » Hotellọ nkwari akụ Monte-Carlo Beach: Ọlaedo rụzuru organic
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akwụkwọ akụkọ Monaco • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Green Globe nyere Monte-Carlo Beach Gold Ọnọdụ n'oge na-adịbeghị anya na nkwenye nke afọ ise na-esote asambodo.
Atụmatụ nlekọta nkwado zuru oke nke Monte-Carlo Beach kpuchiri atụmatụ gburugburu ebe obibi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya kemgbe ọtụtụ afọ, ihe onwunwe ahụ na-aga n'ihu na-akpali mmụọ ozi ọhụụ ọhụrụ.
Monte-Carlo Beach Na-aga Organic
Kemgbe afọ 2013, ụlọ oriri na ọ Monụ leaderụ Monte-Carlo Beach Elsa ka Ecocert, bụ onye ndu France na asambodo akwụkwọ, nyere bio (Bio).
Elsa bụ ụlọ oriri na ọ goụ goụ izizi gourmet na mpaghara Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) iji nweta ụdị asambodo kachasị elu nke Organic 3. N'afọ sochirinụ na 2014, ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ nwetara Michelin Guide kpakpando ekele maka ikike na okike nke Executive Chef Paolo Sari na ogo nke ngwaahịa ọhụrụ, mpaghara na ngwaahịa. Taa ụlọ oriri na ọ fiveụ fiveụ ise niile dị na Monte-Carlo Beach Hotel (Elsa, Le Deck, La Vigie Lounge & Restaurant, Cabanas na La Pizzeria) na-eji 100% mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ahịhịa. A na-ahụkwa ngwaahịa ndị dị na osisi n'ụlọ mmanya, minibars ma nyefee ha site na ọrụ ime ụlọ.
Ogige ahụ dị na Monte-Carlo Beach na-enyekwa ọgwụgwọ nlekọta anụ ahụ dị elu na Phytomer Cosmetics, usoro ekepụtara eke nke na-enye ụzọ ọhụụ maka nlekọta mma mara mma. Ọzọkwa, ụlọ nkwari akụ na-ahọrọ Casanera organic ncha ntutu, gel ịsa ahụ na ude mmiri ahụ bụ 100% emere na Corsica. Ebumnuche a bụ ịgbatị usoro iwu ya site na iwebata ngwaahịa ndị ọzọ dị ka mkpofu achara mkpofu na Fairtrade kọfị organic nke ụlọ ọrụ French na-ahụ maka gburugburu bụ Malongo.
Na 2014, Monte-Carlo Beach bịanyere aka na The Relais & Chateaux Vision na UNESCO na Paris. Ọhụụ a na-agba ndị binyere aka ume ka ha rụọ ọtụtụ ọrụ dị iche iche gụnyere nkwado nke ndị ọrụ ugbo na ndị ọkụ azụ na mpaghara, iji kpuchido ma kwalite ụdị dị iche iche dị iche iche, ịgba ume maka ịkụ azụ kwesịrị ekwesị, iji belata nri nri, ịchekwa ume na mmiri, na iji nye ezigbo ọnọdụ ọrụ na ụgwọ ọnwa ndị ọrụ.
La Route du Gout (Rozọ nke Ire)
Monte-Carlo Beach esorola Chef Paolo Sari rụkọọ ọrụ maka La Route du Gout, ememme nke gastronomy organic. Onye isi nri Paolo bụ naanị onye isi nri Michelin star siri ike n'ụwa. Ebumnuche nke ememme a bụ itinye onye ọ bụla - ndị otu ọha na eze, ụmụaka, ndị isi na ụlọ ọrụ - iji kwalite atụmatụ obibi obibi na ịkwado ọrụ ebere dị iche iche. Site na Bio Chef Global Spirit Association nke Chef Paolo Sari bidoro, a ga-emezue ọrụ enyemaka nke iwulite Moné & Paolo Sari Culinary School of Arts & Hospitality site na Ọktọba 2018.
N'ime afọ atọ gara aga, Monte-Carlo Beach ejirila ụmụaka gbara afọ 8 na 13 dị afọ iri na ụma, Société des Bains de Mer: Executive Chefs na ụlọ oriri na ọ partnerụ partnerụ ibe ha iji mepụta nri nri ndị a na-eri n'oge nri abalị Gala na La Route du Gout Ememme emere kwa ọnwa Ọktọba.
Havemụaka nwere ohere ịnụ ụtọ ngwaahịa dị iche iche ma nyere ndị isi nri na isi nri siri ike na nri nri afọ. Ha na-akwado otu nri ahịhịa organic, nke a na-ewepụta ya na ndị ọkachamara yana ndị ọbịa akpọrọ. A na-emepụta ogige osisi biodynamic na-ese n'elu mmiri nke 300 square mita maka mmemme na Marina nke Monaco.
Maka ozi ndị ọzọ biko lee -zọ-du-gout.com , [email protected] ma ọ bụ lee vidiyo ahụ.
Oceanbọchị Oké Osimiri Worldwa
Dịka akụkụ nke emume Day Ocean World na June 8th, Monte-Carlo Beach tụpụtara "Zute & Nwee ekele" ya na onye ọkụ azụ azụ Monegasque a ma ama Mr. Eric Rinaldi na Port Hercule nke Monaco. A kpọkwara ndị ọbịa ka ha zukọọ ma nwee ọ aụ oriri na enyi na Chef Paolo Sari yana nri nri ehihie na Elsa, ụlọ oriri na ọ diningụ fineụ mara mma.
Obọchị Obọchị Osimiri Menuwa:
Raw red shrimps si San Remo, nwa fennel, aprịkọt ekpomeekpo & nacarii caviar
Azụ Scorpio azụ Tagliolini pasta na tomato nwere ezigbo ose bekee
Mpaghara mullets na-acha uhie uhie, fava agwa, puree na akwụkwọ nri ụmụaka
Red tomato fantasy
Kọfị ahia na mignardises dị mma
Green Globe bụ usoro nkwado nke ụwa niile dabere na njirisi akwadoro nke mba ụwa maka ịrụ ọrụ na njikwa nke njem na njem azụmahịa. Arụ ọrụ n'okpuru ikikere zuru ụwa ọnụ, Green Globe dị na California, USA ma na-anọchite anya ya na mba 83. Green Globe bụ onye mmekọ nke United Nations World Tourism Organisation (UNWTO). Maka ozi, biko pịa ebe a.